‘रोज’मा प्रेमी प्रदिप, वकिल मिरुना, ‘मिस नेपाल’ परमिता - Glamorous Icon
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:१४
Home›GIcon News›‘रोज’मा प्रेमी प्रदिप, वकिल मिरुना, ‘मिस नेपाल’ परमिता
‘रोज’मा प्रेमी प्रदिप, वकिल मिरुना, ‘मिस नेपाल’ परमिता
हतारमा सुटिङ सकेर चलचित्र ‘रोज’ को टिम पब्लिसिटी कन्सर्टका लागि भोली उपत्यका बाहिर निस्किँदै छ । त्यसअघि चलचित्रका मुख्य कलाकार प्रदिप खड्का, परमिता आरएल राणा र मिरुना मगर वुधबार पत्रकारमाझ प्रस्तुत भए ।
सामान्यतया कलाकारहरु चलचित्रको रिलिज अगाडि आफ्नो भूमिकाको बारेमा धेरै कुरा खुलाउँदैनन् । चलचित्रको कथा लिक होला भन्नेमा सचेत रहन्छन् । तर, यी तीन कलाकारले भने आफ्नो भूमिका र चलचित्रको कथावस्तुबारे बोल्न कन्जुस्याई गरेनन् ।
नायक प्रदिप खड्काका अनुसार उनले यो चलचित्रमा साइन गर्नुअगाडि धेरैपटक सोचेका थिए । आफ्नो रोमान्टिक छविलाई कतै धक्का पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता उनमा थियो । तर, चलचित्रको बिषयवस्तुबाट सन्तुष्ट भएपछि उनी काम गर्न तयार भए ।
प्रदिपले भने- ‘कुनै पनि प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई किन मार्छ ? उसँग सबै विकल्प सकिएपछि मात्र उसले मार्ने र आफू पनि मर्ने निर्णय गर्छ । कथावस्तुमा काम गर्दा मैले यो कुरामा फोकस गरेको थिएँ । यदि, चलचित्रमा प्रेमिका मार्ने बाहेक अन्य विकल्प देखियो भने म गर्दिनँ भन्ने सोचमा थिएँ । तर, लेखकले कथावस्तुलाई त्यो विन्दुमा पुर्‍याएपछि म सन्तुष्ट भएँ ।’
आफ्नो ‘सेफ जोन’ भन्दा केही पर हटेर प्रदिपले यसपटक अभिनय गरेका छन् । त्यसैले पनि उनी दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो भन्नेमा सचेत छन् । चकलेटी नायकले भने-‘दर्शकलाई चलचित्रको बिषयवस्तु कस्तो लाग्छ त्यो भोलीको कुरा हो । तर, मिडिया र दर्शकले मेरो कामलाई स्विकार गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । यदि, दर्शकलाई मेरो यो रोजाई मन परेन भने पनि उहाँहरुले मलाई माफ गर्नुहुने आशामा छु ।’
चलचित्रमा नायिका मिरुना मगर वकिलको भूमिकामा देखिएकी छिन् । यो भूमिका निभाउन आफूलाई सुरुमा केही गाह्रो भए पनि पछि सहज भएको उनको भनाई थियो ।
मिरुनाले रमाइलो अनुभव सुनाउँदै भनिन्-‘चलचित्रमा धेरै पटक श्रीमान् श्रीमान् भन्नुपर्दा मलाई असहज लागेको थियो । किनकी, श्रीमान् त आफ्नो लोग्नेलाई मात्र भन्छन् भन्ने लाग्थ्यो ।’
वकिल बनेकी मिरुना किन हत्यारा प्रेमीको पक्षमा अदालतमा बहस गर्छिन् भन्ने कौतुहलता दर्शकमा छ । मिरुना पनि यो कुरा नै चलचित्रको मुख्य विन्दुमा रहेको बताउँछिन् ।
नायिका परमिता आरएल राणा यो चलचित्रको शिर्ष भूमिकामा छिन् । उनकै हत्याको वरिपरी यो चलचित्र घुमेको छ । परमिताले आफू चलचित्रमा मिस नेपालको भूमिकामा देखिएको बताइन् । उनले भनिन्-‘म चलचित्रमा मिस नेपालको भूमिकामा छु । दर्शकले आफ्नै सेरोफेरोमा चलचित्र घुमेको पाउने परमिताको भनाई छ । उनले, आफ्नो रियल लाइफको पेशा र चलचित्रको भूमिका उस्तै रहेको सुनाइन् ।
《《Teej Fashion show & Musical Event 》》
फिल्म र म्युजिक भिडियोमा रियल जोडीको बोलबाला
आरोप बिचार लाग्न सुरु भइ सक्यो मण्डलामा आरोप किन र कसरि ??
सक्कियो सुजता पाण्डेको नेपाल आइडल यात्रा
अस्कर विजेता ‘मुनलाईट’सहित तीन फिल्मको नेपाल रिलिज तय
र्‍यापर यम बुद्ध लन्डनस्थित घरको बाथरुममा मृत भेटिए
‘गोल्ड र सत्यमेव जयते’को धमकेदार सुरुवात
E planetGIcon NewsGIcon News
आकाश र नाजिर ‘विर र विक्रम’ बन्दै, बाजा बजाएर गरियो स्वागत
Mero Aankha Ma – Aarakshyah (Cover)Gicon Creation
मालिका’ फिल्मका निर्माता नरबहादुर कार्की पक्राउ